केटा र केटीहरूको लागि चुम्बन gifs। यहाँ तपाईं सुन्दर चुम्बन तस्बिरहरू र gif डाउनलोड गर्न र आफ्नो प्रेमीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। यस चयनले सुन्दर, रोमान्टिक, हास्यास्पद र हास्यास्पद चुम्बन gif र चित्रहरू समावेश गर्दछ। छान्नुहोस् र तपाइँलाई मनपर्ने एक पठाउनुहोस्। आनन्द लिनुहोस्! सबै gifs डाउनलोड को लागी स्वतन्त्र छन्।
सबै gifs र च्याट
अँगालो र चुम्बन gif
च्याट वा व्हाट्सएपमा पठाउन gif हग्स र चुम्बनहरूको ठूलो चयन। छनौट गर्नुहोस् र तपाइँको फोन वा कम्प्युटर मा चित्र gif ढाँचा डाउनलोड गर्नुहोस्। चुम्बन, hugs, cuddles, चुम्बन - यो सबै कुनै पनी आवेदन को च्याट गर्न पठाइन्छ। तर सावधान रहनुहोस्, यदि तपाइँ तपाइँको साथी लाई एक gif पठाउनुहुन्छ, तब सूची बाट एक विकल्प छान्नुहोस्। किनभने यो फ्लर्टिंग वा सहानुभूतिको प्रदर्शन को रूप मा देख्न सकिन्छ। केटीहरु चुम्बन gifs लाई माया गर्छन्, र केटाहरु लाई धेरै धेरै गिग्स लाई माया गर्छन्। यी gifs हाम्रो साइट बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। प्रत्येक gif एक संक्षिप्त विवरण छ।
भावुक चुम्बन gif
यदि तपाइँ एक भावुक चुम्बन संग त्यस्ता gifs देख्नुहुन्छ - यो केवल कोमलता वा प्रेम को एक प्रदर्शन होइन, यो एक संकेत हो कि व्यक्ति को लागी केवल सहानुभूति भन्दा बढी महसुस गर्दछ। यदि तपाइँ यस्तो gifs देख्नुहुन्छ, तपाइँलाई थाहा छ: तपाइँ साँच्चै उनीहरुलाई पठाउने व्यक्ति मनपर्छ, तर उसले अझै पनी तपाइँलाई यो स्वीकार गरेको छैन। लाज नमान्नुहोस् र पर्खनुहोस् जबसम्म व्यक्तिले थाहा पाउँदैन कि उसले पनि तपाइँको ख्याल राख्छ। वैसे, यदि तपाइँ पनि तपाइँको साथीहरु लाई यस्तो gifs पठाउन चाहानुहुन्छ, यो तपाइँ उनीहरु संग तपाइँको सम्बन्ध को विविधता को लागी अनुमति दिनेछ। आखिर, त्यहाँ धेरै अन्य तरिकाहरु एक व्यक्ति को लागी तपाइँको सहानुभूति देखाउन को लागी, उदाहरण को लागी, सामाजिक नेटवर्क मा पत्राचार वा पनी छन्। आफ्नो साथी वा प्रेमिकालाई भावुक चुम्बनको साथ एक gif पठाउनुहोस् र हेर्नुहोस् कि व्यक्तिले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ। वा हुनसक्छ उनी वा उनी एक लामो समय को लागी तपाइँको माया मा भएको छ र तपाइँ यो महसुस गर्न को लागी पर्खिरहनुभएको छ? त्यसपछि पहिलो चाल बनाउन संकोच नगर्नुहोस्। यो गम्भीर सम्बन्ध को शुरुवात हुन सक्छ जुन तपाइँ सधैं सपना देख्नुभयो।
रोमान्टिक चुम्बन gif
तपाइँको मायालु को लागी एक रोमान्टिक चुम्बन gif एक महान तरीका हो तपाइँको प्राण साथी लाई बताउन को लागी तपाइँ उसलाई कती माया गर्नुहुन्छ। चुम्बन, अरू केहि जस्तै, केटीको लागि मानिसको असीम र शुद्ध प्रेमको कुरा गर्छ। हामीले हाम्रो प्रेमलाई लुकाउन जतिसुकै प्रयास गरे पनि, तर चुम्बनको क्षणमा, विशेष गरी रोमान्टिक र कोमल एक, हामी खोल्न तयार छौं। चुम्बनहरू सबैभन्दा प्राकृतिक, सबैभन्दा पहिलो र सजिलो फोरप्ले हुन्। उनीहरु निर्दोष हुन सक्छन्, वा उनीहरु एक जोश, अर्को व्यक्ति को लागी एक जुनून बोक्न सक्छन्। मुख्य शर्त हो कि तपाइँलाई भेट्नु पर्छ - चुम्बन कोमल, रोमान्टिक र यादगार हुनुपर्छ। एक चुम्बन आफ्नो प्रेम र स्नेह देखाउन एक राम्रो तरिका हो। यो कोमल वा भावुक, ईमान्दार वा नक्कली, लामो वा छोटो, हल्का वा कामुक, जीभ संग वा बिना हुन सक्छ। चुम्बन संग तपाईं आफ्नो भावना व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इच्छा र सपना बारे बताउन सक्नुहुन्छ।
शुभ रात्री चुम्बन gif
आफ्ना प्रियजनहरुलाई एक सुत्ने चुम्बन gif पठाउनुहोस् उनीहरुलाई छिटो सुत्न र एक राम्रो रात को आराम पाउन! यो प्यारा gif पनी frowniest व्यक्ति मुस्कान बनाउनेछ। र यदि तपाइँ यसलाई तपाइँको मायालु को लागी पठाउनु भन्दा पहिले तपाइँ सुत्न जानु भन्दा पहिले, तपाइँ बदलामा एक धेरै राम्रो र कोमल अg्गालो पाउन सक्नुहुन्छ। बस WhatsApp मा तपाइँको प्रियजनलाई यो gif पठाउनुहोस्। र यदि तपाइँको मायालु एक टाढा छ, उसलाई वा उसलाई चुम्बन र एक मुटु संग यो प्यारा gif पठाउनुहोस्, त्यसैले ऊ पक्कै तपाइँ याद गर्नुहुन्न। कुनै पनी तरिका, यो तपाइँको सम्बन्ध अधिक न्यानोपन र कोमलता दिनेछ। सबैको दिन शुभ रहोस!